INNA – HOOYO WAA UUR HABREED - iftineducation.com
INNA – HOOYO WAA UUR HABREED
Waxaa la yiri, col ayaa weeraray reer meel deggan. Markaasuu colkii dilay dadkii oo dhan, xoolahoodiina dhacay. Markii danbe ayaa colkii, isagoo ka soo noqday cidihii, ayuu hadana wuxuu qabtay naag iyo walaalkeed iyo ninkeedii iyo wiilkeedii.
Dadkaas la qabtayna waxay ka mid ahaayeen cidihii la wada laayey. Ninkii abbaanduulaha u ahaa colka, ayaa goor la damcay in la dilo ninka iyo naagta iyo wiilka iyo waalaalka ku yiri colkii “ Ha dilina, ee u suga in yar”. Ninkii abbaanduulaha ahaa, wuxuu naagta ku yiri “Adigu waxaad tahay naag!, marka lagu dili mayo, inta kalena waa la wada dilayaa”! Markaas ayaa naagtii iska oydey oo ku tiri ninkii abbaanduulaha colka u ahaa: “Waxaan kaa doonayaa inaad walaalkey iyo ninkayga iyo wiilkeyga ii daysaa, haddii aad layseen ciddayadii oo dhan?
Markaasaa ninkii abbaanduulaha ahaa ku yiri naagtii: “Wiilkaagu iyo ninkaaga iyo walaalkaaba waa niman, narka waa la laynaayaa!!”.
Markaaseey naagtii ku dhegtey ninkii abbaanduulaha ahaa labada lugood oo six un u bariday. Markaasuu hadduu naagtii iska furfuri waayey, markii danbe ku yiri naagtii: “ Waxaan kuu deynayaa hal qof, maka ka soo fiirso qofkii laguu deyn lahaa!.
Ma waxaad rabtaa wiilkaaga, mase ninkaada, mase walaalkaa.! Bal adigu kala dooro?”. Abaanduulihii wuxuu naagtii ku yiri. “Laba saac ayaad muddo ka soo fiirso!. Labadii saac markii ay dhammaatay oo naagtii hadal laga waayey, ayuu ninkii abaanduulaha ahaa ku yiri naagtii, “Marka saacaddii way dhamaataye kee dooratay?. Naagtii waxay tiri: Ii wada daa dhamaantood, waan ku baryayaaye?. Ninkii ciidanka watey wuu diidey.
Markii danbe, ayey tiri: “Marka waxaad ii deysaa walaalkay!!! “Markaasaa ninkii abbaanduulaha ahaa yaabay oo ku yiri naagtii “Walaalkay!!!”. Naa ma waalan tahay!?. “Aawaye wiilkaagii iyo ninkaagii?!. Waxay tiri: Ninna waan heli karaa, wiilna waan heli karaa, laakiin walaal – hooyo ma heli karo?!.” Abbahay iyo hooyaday way dhinteen wax walaal kale ii dhalana ma haysto, marka ina-hooyo waa uur habreed. Markaasaa ninkii intuu yaabay u wada daayay kuligood.